Qareenkii hore ee Trump oo bixiyey sir badan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Qareenkii hore ee Trump oo bixiyey sir badan
Qareenkii hore ee Trump oo bixiyey sir badan
February 28, 2019 - By: Khalid Yusuf
February 27, 2019 Washington, D.C. Michael Cohen – Photo by David Butow/Redux
Michael Cohen oo ah qareenkii hore ee Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xog badan Kongareeska Maraykanka kasiiyey sirta Trump oo la xariirta lacago musuq maasuq ah oo uu bixiyey, cunsurinimada Trump & naceybka uu u qabo dadka madow iyo xog badan oo la xariira dhaqaalihiisa gaarka ah.
Cohen oo lagu wado in dhawaan uu xabsiga galo kadib markii lagu helay falal danbiyo la xariira musuq maasuq xiriir laleh hawlihii qarsoodiga ahaa ee uu u qaban jiray Donald Trump.
Michael Cohen ayaa sheegay inuu raaligelin ka bixinayo dhamaan danbiyadii uu galay ee uu ku difaacayey Donald Trump, wuxuuna ku sheegay Madaxweynaha Maraykanka;
Cunsuri si xun ulla dhaqma dadka madow.
Beenaale been ka sheega ganacsigiisa iyo hantidiisa
Khiyaanoole aan jecleyn inuu bixiyo canshuurta
Mr.Cohen ayaa sheegay in Trump uu si weyn u qariyo lacagtiisa iyo meesha ay kasoo gasho taasina keentay inuu diido inuu shaaciyo Xogtiisa dhaqaale xiligii uu ololaha doorashada ku jiray, Trump ayaa ka cabsi qabay in baaritaan lagu sameeyo hantidiisa.
Wuxuu Qareenkii hore ee Trump faah faahin ka bixiyey lacagtii uu siiyey haweenay aflaamta jinsiga sameysa (Ms. Stormy Daniels) oo uu Trump xiriir qarsoodi ah lalahaa, isla markaana ay siiyeen haweenaydaasi lacag gaareysa 130.000 dollar si aysan sirtaasi u shaacin xiligii uu Trump ku jiray ololaha Doorashada Madaxweynaha.
Bixinta lacagtan ayaa ahayd mid jabisay sharciyada u yaal xeerka lacagaha ololaha doorashooyinka Maraykanka, waxayna qeyb ka ahayd danbiyada lagu helay Michael Cohen oo lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah.
Dhinaca xiriirka Ruushka ayuu sheegay Cohen in Trump uu xiriir qarsoodi ah lalahaa shabakada sirta faafisa ee Wikileaks oo shaacisay xog badan oo lid ku ahaa Murashaxadii la tartameysay ee Hillary Clinton, xogtaasi oo laga jabsaday Computerada Xisbiga Dimuquraadiga, xogtaasi la xaday ayaa la rumeysan yahay inay ka danbeeyeen kooxo u shaqeeya Ruushka oo xogtaas usii gudbiyey Wikileaks.
Intuu Michael Cohen warbixintan siinayey Kongareeska Maraykanka ayaa su’aalo badan laga weydiiyey xogta uu soo bandhigay, xildhibaanada Xisbi Xaakimka ee isku dayey inay difaacaan Donald Trump ayaa weerar kulul ku qaaday Cohen oo ay ku sheegeen qof been badan oo aan la aamini karin, walow ay xildhibaanadaasi Jamhuuriga ku guuleysan waayeen inay dood ka keenaan xogta xasaasiga ah ee uu bixiyey Mr.Cohen.